लाखौ पैसा घोटला हुन्छ बिचौलिया देखी ब्यापारीको नाउमा ! २ लाखमा किनेको गाडी १४ लाख नेपालमा यसरी बन्दो रहेछ ... - Sudur Khabar
admin January 12, 2018 अार्थिक 0
Total Reader : 115
भारतबाट दुई लाख ७५ हजार नेपाली रुपैयाँमा किनेको कार नेपालमा कति रुपैयाँमा बिक्री होला ? महँगो मूल्य अनुमान गर्नुहोस् ।
फरक फरक मान्छेको फरक फरक अनुमान हुनसक्छ ।
नेपाल सरकारले सवारी साधानमा उच्च दरको कर लगाउँछ भन्ने जानकारी भएका मानिसले दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँमा किनेको गाडी व्यापारीले कम्तिमा ८ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने अनुमान गर्न सक्छन् । यो क्षेत्रको व्यापारलाई राम्ररी बुझेका मानिसले दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँमा किनेको गाडी करिव १० लाखमा बिक्री गर्ने अनुमान गर्लान् ।
के तपाई इन्टरनेटको माध्यम बाट घर बसी बसी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? येदि चाहनुहुन्छ यी आईडियाहरु फ्लो अप गर्नुहोस ।
पञ्चायत कालमा राणाशानको पालामा यही मेसिन बाट पैसा छाप्ने गर्थ्यौ ! सबैलाई जानकारी दिलाउन फोटो सियर गरौ ।